विवादै विवादको घेरामा राष्ट्रपति ट्रम्प: लाग्ला महाभियोग ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 01:41:31
जापानी समय : 04:56:31
विवादै विवादको घेरामा राष्ट्रपति ट्रम्प: लाग्ला महाभियोग ?
19 May, 2017 23:19 | विश्व समाचार | comments | 109500 Views
अमेरिकाको राजनीतिमा मसिनो स्वरमै सही राजनीतिज्ञ र विश्लेषकबाट यो साता विश्वकै शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै अप्रिय शब्द ‘इम्पिचमेन्ट’ अर्थात् महाभियोग शब्द प्रयोग भयो । अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा बहाल गरेको चार महिना नपुग्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाउने चर्चामात्रै सुरु हुनु पनि चानेचुने कुरा होइन ।
हालै अपदस्थ गरिएका संघीय जाँच ब्युरो (एफबीआई) का निर्देशक जेम्स कोमेले तयार पारेको राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ उद्धृत टिपोट (मेमो) द न्यु योर्क टाइम्सले मंगलवार सार्वजनिक गरेपछि महाभियोगको प्रसंग चलेको हो ।
महाअभियोग पक्रिया त अघि बढ्ला नबढ्ला तर राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि संकट भने बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपतिका निकट सहयोगी पनि सातैपिच्छेका विवादका कारण चिन्तामा परेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहीवार आफूसँग इतिहासमै सबैभन्दा नराम्रो व्यवहार गरिएको गुनासो गर्दै यसको दोष भने फेरि पनि सञ्चार माध्यमलाई नै दिए ।
द न्यु योर्क टाइम्सले गत मंगलबार छापेको अपदस्थ एफबीआई निर्देशक कोमेको मेमो नोटमा राष्ट्रपति ट्रम्पले २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा रसियाको शंकास्पद भूमिका बारे छानबिनका क्रममा ट्रम्प प्रशासनका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जनरल माइकल फ्लिनमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई अगाडि नबढाउन भने भन्ने उल्लेख छ । कोमे र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच फेब्रुअरी १४ मा भएको कुराकानीमा ट्रम्पले ‘म चाहन्छु यसलाई यत्तिकै जान देऊ’ भनेको कोमेको मेमो नोटमा उल्लेख भएको टाइम्सले लेखेको छ ।
कोमेको यो टिपोट सत्य हो भने प्रचलित कानुनअनुसार ‘कानुन पालनामा अवरोध गरेको’ आरोपमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लाग्न सक्छ । वासिङटनको राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपतिविरुद्ध यस्तो अवाज पनि उठ्न थालेको छ । सिनेटर एंगुर किङले टेलिभिजन च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् – ‘भन्न कठिन छ तर यस्तै अवस्था आएको छ ।’
राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रतिनिधित्व गर्ने रिपव्लिकन पार्टीका एरिजोनाका सिनेटर जोन म्याकिनले मंगलबार एक कार्यक्रममा ट्रम्पका काण्डहरू वाटरगेट साइज र तहमा पुगेको टिप्पणी गरेका थिए । म्याकिनले इन्टनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटको रात्रीभोजमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
ह्वाइटहाउस प्रवेश गरेको सातादेखि नै विवादमा तानिँदै आएका ट्रम्पले केही दिनअघि अकस्मात् एफबीआई निर्देशक कोमेलाई बर्खास्त गरेका थिए । सात वर्ष पदावधि बाँकी छँदै कोमेलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरी तत्काल लागु हुने गरी पदबाट हटाएका थिए ।
अमेरिकाको राजनीतिमा कोमे प्रकरण चर्चामा रहेकै बेला राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका भ्रमणमा रहेका रसियाका विदेशमन्त्री सर्जेई लावरोव र राजदूतलाई ‘क्लासिफाइड इन्टिलिजेन्स’ अर्थात् निषेधित गोप्य सूचना साझा गरेको द वासिङटन पोस्टले सार्वजनिक गरेको थियो । आतंककारी संगठन आईएसआईएसले तयार गरेको भनिएको ल्यापटप बम र हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित गोप्य सूचना अमेरिकी गुप्तचर निकायलाई अर्को देशको यस्तै निकायबाट प्राप्त भएको थियो ।
यो सूचना अमेरिकी गुप्तचर निकायको प्रयोजनका लागि मात्र प्राप्त भएको थियो । यस्तो सूचना रसियालाई दिन सकिने भन्ने थिएन । रसियाका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनले ट्रम्पले त्यस्तो गोप्य सूचना नदिऐको टिप्पणी गरेपछि रिपब्लिकन पार्टीभित्र केही शान्त देखिए पनि ट्रम्प विवादमुक्त भने भएका छैनन् । इतिहासमा लामो शीतयुद्धबाट गुज्रिएको अमेरिका र रसियाबीचको सम्बन्ध अभैm पनि न्यानो भइसकेको छैन । अहिले पनि धेरै अमेरिकी रसियालाई मित्र स्वीकार्न सक्दैनन् । यसैबेला कोमेको मेमोले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई थप संकटमा पारेको हो ।
सत्तारुढ रिपब्लिकन पार्टीभित्र ट्रम्पका विवादास्पद टिप्पणी र आचरणका कारण छटपटी भने सुुरु भएको छ । ट्रम्पसँग लगातार जोडिएर आएका यस्ता विवादले रिपब्लिकन पार्टीको नीति कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । ह्वाइटहाउसले केही साता अघि ल्याएको नयाँ स्वास्थ्य नीति सिनेट (माथिल्लो सदन) बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
यसबाहेक अफगानिस्तान, आतंककारी संगठन आईएसआईएस सम्बन्धी नीमिा पनि विवादका कारण ह्वाइट हाउसले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता वासिङटनको राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ । सातैपिच्छेको काण्ड र विवाद देशका लागि हानिकारक भएको फ्लोरिडाका रिपब्लिकन सांसद कार्लोस कावेलाकोे टिप्पणी छ ।
राष्ट्रपतिले पटक पटक जनरल माइकल फ्लिन भद्र मानिस भएको, उनले देशको रक्षाका लागि सेवा गरेको र कोमे वा कसैलाई पनि उनका बारेमा भइरहेको अनुसन्धान रोक्न नभनेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । ह्वाइट हाउसको दाबी सही हो भने कोमेले किन झुट बोले वा उनी र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच भएको कुराकानी नै गलत बुझे भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
ट्रम्पको आशय उनले बुझेनन् भन्ने पनि उनको विगत हेर्दा सत्याउन सकिने देखिँदैन ।
अमेरिकाको संसदीय समितिले मंगलबार नै कोमे र राष्ट्रपतिबीचको कुराकानीको रेकर्ड मागेको छ । अहिले सन् २०१६ को चुनावमा रसियाको शंकास्पद भूमिकाको अनुसन्धान गर्न पूर्वएफबीआई निर्देशक रर्बट मुलरलाई जिम्मा दिइएको छ ।
मुलरलाई यो जिम्मेवारी दिइएकोमा पनि ट्रम्प आक्रोशित छन् । विगतमा विवादमा किन यस्तो समिति बनाइएन अहिले मेरा लागि किन भयो भन्ने ट्रम्पको आक्रोश छ । जस्टिस डिर्पाटमेन्टले मुलरलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिएको हो । आन्तरिक विवाद साम्य नहँुदै ट्रम्प भने आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि मध्यपूर्वतर्फ लागेका छन् ।
यो साता महाअभियोग शब्द चर्चा हुँदामात्रै पनि अमेरिकीको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्यो । गत बुधवार सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो भने अमेरिकी डलर विश्वका अन्य मुद्राका तुलनामा कमजोर हुन पुग्यो । थप विवाद नआओस् भन्ने अहिले अमेरिकी मतदाता चाहना देखिन्छ । जनचाहना सुन्ने हो भने महाभियोग तत्कालै लाग्ने सम्भावना बिरलै छ भन्न सकिन्छ ।